Mara Ike Gị
Ike nwere ike ịgwụ mmadụ ma ọ chọwa ịkwụsịcha àgwà ọjọọ niile riri ya ahụ́ n’otu ụbọchị. Dị ka ihe atụ, mmadụ nwere ike ikpebi na ya ga-akwụsị ịṅụ sịga, ikwu okwu rụrụ arụ, na ehighị ụra n’oge, kpebiekwa na ya ga-amalite imega ahụ́, iri nri na-edozi ahụ́, na ịkpọ nne nne ya na nna nna ya n’ekwentị. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na ọ bụrụ na onye ahụ na-achọ imecha ihe ahụ niile otu mgbe, o nweghị nke ọ ga-emete.
IHE BAỊBỤL KWURU: “Ndị dị obi umeala nwere amamihe.”—Ilu 11:2.
Onye dị obi umeala anaghị eme ihe ọ ma ga-agbaji ya aka. Ọ ma na ọ bụghị ihe niile ka ọ ga-emeli otu mgbe. Ụdị onye a anaghị achọ ịgbanwe ihe niile riri ya ahụ́ n’otu ntabi anya, kama, ọ na-eji nwayọọ nwayọọ agbanwe.
Ọ bụrụ na mmadụ na-achọ imecha ihe niile otu mgbe, o nweghị nke ọ ga-emete
Na-agbanwe àgwà ndị riri gị ahụ́ otu otu. Legodị ihe ụfọdụ nwere ike inyere gị aka:
Were otu akwụkwọ dee àgwà ọma ndị ị chọrọ ịna-akpa, werekwa akwụkwọ ọzọ dee àgwà ọjọọ ndị ị chọrọ ịkwụsị. Edekwala naanị ndị nke i chere ị ga-emeli. Dee àgwà ọma niile i kwesịrị ịna-akpa na ndị nke ọjọọ niile i kwesịrị ịkwụsị n’akwụkwọ nke ọ bụla.
Chọpụta àgwà ọma ndị mbụ i kwesịrị ịkpawa na ndị nke ọjọọ i kwesịrị ịkwụsị.
Si n’àgwà ndị ahụ i depụtara họrọ otu àgwà ọma ma ọ bụ abụọ ị ga-akpawa, họrọkwa otu àgwà ọjọọ ma ọ bụ abụọ ị ga-akwụsị. Lekwasị ha anya, ọ marawa gị ahụ́, gị agafee n’otu àgwà ọzọ ma ọ bụ abụọ na-eso ndị nke mbụ.
Bido ozugbo kpawa àgwà ọma ndị ga-amara gị ahụ́. Dị ka ihe atụ, o nwere ike ịbụ na otu n’ime àgwà riri gị ahụ́ ị chọrọ ịkwụsị bụ ile tiivi, ya abụrụkwa na otu n’ime àgwà ọma ị chọrọ ịkpawa bụ ịna-akpọtụrụ ndị ikwu na ibe gị. Ọ bụrụ otú ahụ, i nwere ike ikpebi na ihe mbụ ị ga na-eme ma ị lọta ọrụ bụ ịkpọ otu enyi gị ma ọ bụ onye ikwu gị n’ekwentị, ọ bụghị ịgbanye tiivi.
“Chọpụta ihe ndị ka mkpa.”—Ndị Filipaị 1:10.
“Njedebe okwu dị mma karịa mmalite ya.”—Ekliziastis 7:8.
mailto:?body=Mara Ike Gị%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D102016125%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Mara Ike Gị